တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရုတ်လိမ်လည်မှုကြီး ပြန်လည် ကူးယူ မျှဝေ ပါသည်။ – စွယ်စုံသုတ
ပြန်လည် ကူးယူ မျှဝေ ပါသည်။
အီတလီသည် Covid-19ဖြင့်သေဆုံးသော လူသေအလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးခြင်း (postmortem) ကိုပထမဆုံးပြုလုပ်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
ကျယ်ပြန့်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမူ့မ်ားအရ Covid-19 သည်ဗိုင်းရပ်စ်အဖြစ်မတည်ရှိပဲ၎င်းသည်လွန်ကဲမူ့ဖြစ်သည်။ ကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုရှိပါတယ်။
လူများသည် “Amplified Global 5G Electromagnetic Radiation (အဆိပ်)” ကြောင့်သေနေရသည်။ * အီတလီဆရာဝန်များသည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့သည် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသွားသောလူသေအလောင်းများအားခွဲစိတ်ကုသမှု့(Postmortem) ကိုခွင့်မပြုသည့်ကြောင့်သိပ္ပံနည်းကျစုံစမ်းစစ်ဆေးမူ့အပြီးတွင်၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်ပဲသေစေနိုင်သောဗက်တီးရီးယားတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းနှင့်သွေးကြောများအတွင်းသို့ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်သွးကြောများနှင့်အာရုံကြောများ၌စုဆောင်းပြီးလူနာအားသေစေခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော် ပြောဆိုလာပါတယ်။
ယခုအခါအီတလီသည်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအနိုင်ယူပြီးပျံ့နှံ့ – သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးခဲခြင်း (တီဘီ) မှတစ်ပါးအခြားမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းအားတိုက်ဖျက်သည့်နည်းလမ်းမှာဆေးကုသမူ့ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
Antibiotics ပိုးသတ် ဆေးပြားများ ရောင်ရမ်းမှုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့် ၎င်းသည် Anticoagulatus * (Aspirin) ကိုသောက်ခြင်းဖြင့်ကုသသည်။ ဒီကမ္ဘာကြီးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာသတင်းကိုအီတလီဆရာဝန်များက Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်အသေကောင်များ၏
အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးခြင်း (postmortem) မှထုတ်ယူခဲ့ပြီးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သောအီတလီသိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရလေဝင်လေထွက်များနှင့်ထိုးဖောက် ၀ငျရောကျကုသမှုယူနဈမြား (ICUs) သည်ဘယ်သောအခါမျှမလိုအပ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ဤအချက်အလက်များကိုသင်၏မိသားစု၊ အိမ်နီးချင်းများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ မိတ်ဆွေများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုမျှဝေပါ။ Covid-19 သည်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲ 5G ဓါတ်ရောင်ခြည်သာရှိသောဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးဖြစ်သည်ကိုနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ခံစွမ်းအားအလွန်နည်းပါးသူတို့ထိခိုက်သေဆုံးနိုင်ချေပိုများပါတယ်။ ဤအခြေအနေရောက်သောသူများသည် Asprin-100mg * နှင့် * Apronicus သို့မဟုတ် Paracetamol 650mg * ကိုသောက်သင့်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော … ???Covid-19 သည်သွေးကြောထဲ၌သွေးခဲစေပြီး ဦးနှောက်၊ နှလုံးနှင့်အဆုတ်များသို့အောက်ဆီဂျင်ကိုမရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
အမောဖောက်၍အသက်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်လူတစ် ဦး လျှင်မြန်စွာသေဆုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီဆရာဝန်များသည် WHO ၏ပရိုတိုကောကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်၏ခြေထောက်များနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုဖွင့်၍ဆန်းစစ်ပြီးနောက်ဆရာဝန်များကသွေးကြောများပြန့်ကြဲသွား၍ သွေးပြန် ကြောများသည် thrombiကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းသို့အောက်စီဂျင်စီးဆင်း နှင့်ပြည့်နှက်နေကြောင်းဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့်လူနာ၏သေဆုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမူ့ကို ရပ်တန့်လျော့နည်းစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုတေသနကိုသိပြီးနောက်အီတလီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက Covid-19 ဆေးကုထုံးကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲလိုက်ပြီး Aspirin ကိုသူ့လူနာများအားပေးခဲ့ပါတယ်။
100mg နှင့် ampromacus ပေးခြင်းစတင်ခဲ့ကြတယ်။ လူနာများပြန်လည်ကျန်းမာလာခြင်းနှင့်သူတို့၏ကျန်းမာရေးတိုးတက်လာခြင်း
အီတလီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည်တစ်နေ့တည်းတွင်လူနာပေါင်း ၁၄၀၀၀ ကျော်ကိုဆေးရုံမှဆင်းခဲ့ပြီး ၄င်းတို့အားသက်ဆိုင်ရာအိမ်များသို့ပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။..
Via : ကိုယ်တော်မှိုင်း